Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ny grinder planeta eto an-tany ho an'ny mpitoto tany
Ny fahombiazan'ny milina fitotoana gorodona dia misy: ny sakan'ny fitotoana, ny fiasan'ny lohan'ny loha, ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana, ny fanerena ny lohan'ny lohany, ny fifehezana ny volan'ny rano, sns. Ny fenitry ny fananganana dia mizara ho: fisaka, fahazavana ary famirapiratana.
1. Ny faritry ny fitotoan'ny milina fitotoan'ny tany: somary miteny, arakaraka ny maha lehibe ny faritra fikosohan'ilay masinina, no avo kokoa ny haavon'ny tany fananganana, fa io koa dia ny fitomboan'ny faritry ny fikosoham-bary mahatonga ny fahombiazan'ny tany ambany ny fahasamihafana ambaratonga.
2. Fombam-piasan'ny lohan'ny fikosoham-bary ny gorodona fitotoan'ny gorodona: Arakaraka ny mahasarotra ny fomba fiasan'ny lohan'ny fikolokoloana ny masinina fanaovana fikosoham-bary, ny haben'ny herin'ny fikosoham-bary, ny haavon'ny fahombiazan'ny asa ary ny haavon'ny tany. Ny tanjaky ny fikosoham-baravaran-tany 12-grind dia matanjaka kokoa.
3. Hafaingan'ny fihodinan'ny fikosoham-gorodona: Amin'ny ankapobeny, ny habetsaky ny revolisiona an'ny lohan'ny fikosoham-bary, dia hitombo koa ny hery fitotoana. Na izany aza, ny hafainganam-pandeha avo be dia hampihena ny hery fikosoham-bary sy ny tany. Rehefa somary ambany ny tsindry ataon'ny lohan'ny fikosoham-bary, dia hampihena ny fiorenan'ny milina izany ary hampihena ny fenitra fananganana.
4. Tsindry ny lohan'ny fikolokoloana ny milina fitotoan'ny gorodona: ny tsindry ny lohan'ny fikosohan'ilay milina fitotoan'ny gorodona ary na ny lanjan'ny milina aza dia mihabe ny tsindry ataon'ny lohan'ny fikolokoloana, ny haavon'ny haavon'ny haavo sy ny haavony . Raha avo loatra ny tsindry ataon'ny lohan'ny fikolokoloana dia hitombo ny hery fanapahana rehefa malefaka loatra ny tany. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha mitovy ny fitotoan'ny gorodona, izay hampihena ny malama amin'ny fanamboarana.
5. Fanaraha-maso ny haavon'ny rano: Amin'ny ankapobeny, ny fitotoan'ny tany dia mizara ho fitotoana lena sy ny fikosehana maina, izay mamaritra ny tany amin'ny ankapobeny. Ny rano dia afaka mitana ny andraikitry ny diloilo, ny fanesorana ny puce ary ny fampangatsiahana. Miaraka amin'ny fanovana ny fizotran'ny fikotrehana ny tany mafy granite dia tokony fehezina ara-potoana ny habetsaky ny rano. Ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny tany dia misy fiatraikany mivantana amin'ny famirapiratan'ny famolavolana.
Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fahombiazan'ny milina fitotoan'ny gorodona, mino aho fa ny olon-drehetra dia afaka mahatakatra ny zava-bitan'ny faritra tsirairay amin'ny milina fitotoana gorodona ary mora ny misafidy ilay milina fitotoana gorodona mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.